Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Christophe Victor dia nanendry ny Executive Assistant Manager an'ny The St. Regis Langkawi, The Westin Langkawi Resort and Spa
Christophe dia hijery ihany koa ny fanitarana ny fahafaha-manao raharaham-barotra iraisampirenena sy ny fampahafantarana mba hanamafisana kokoa ny fametrahana ireo fananana ireo
Christophe Victor dia voatendry ho mpanampy mpanampy mpanatanteraka, Sales & Marketing ho an'ny St. Regis Langkawi, The Westin Resort and Spa Langkawi, ary ny Langkawi International Convention Center. Ankoatry ny fanamafisana ny paikady varotra sy varotra mahomby amin'ny tanjona fampitomboana ny vola miditra, Christophe dia hijery ihany koa ny fanitarana ny fahafaha-manao raharaham-barotra iraisampirenena sy ny fampahafantarana mba hanamafisana kokoa ny fametrahana ireo fananana ireo.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy nitondrany tao Langkawi dia nahatsapa fatratra fatratra i Victoria ny amin'ny vina aman-taratasiny sy ny tatitra nataony: mankany amin'ny tsena iraisam-pirenena. Faly aho fa handray anjara amin'ny fanampiana an'i Langkawi hahatsapa ny fahafaha-miasa feno amin'ny alàlan'ny fanandratana ity tanjona ity ho tonga 'Riviera of Asia vaovao' ”.
Talohan'ny anjara asany vaovao, Christophe dia nanambola nandritra ny 16 taona tamin'ny asany tamin'ny varotra vokatry ny valiny sy ny varotra tamina toeram-pivarotana lafo vidy toa ny Hilton Seychelles Labriz Resort sy Spa ary nanampy tamin'ny famoahana indray ny Velassaru Maldives Resort.
Tsy nisy nijanona tao amin'ny faritra nampiadana azy, fa niditra an-tsena tao amin'ny tsena UAE i Victor ho talen'ny varotra tao amin'ny Rixos Bab al Bahr ao amin'ny Rixos Hotel Group, izay nanangonana ekipa mahay sy nanamboatra ekipa mahay ary namolavola rafitra sy fomba fiasa mahomby mandritra ny fotoana - dingana fanokafana, izay nitarika ny fahombiazan'ny fisokafan'ny toeram-pialantsasatra. Ny andraikiny manaraka dia ny talen'ny Sales Cluster an'ny hotely Anantara efatra, Resorts ary Spa any Maldives, izay nanatsara ny fahalalany sy nifantoka tamin'ny tsena iraisam-pirenena toa an'i Shina, Russia ary Eropa Atsinanana.
Miaramila tambajotra matanjaka amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fahaiza-manao amin'ny indostria, Christophe mihoatra ny nanatontosa ny andraikitra farany nananany talen'ny Sales and Marketing niaraka tamin'i Cheval Blanc Randheli, Maldives, tamin'ny taona 2016. Izy no nanara-maso ny tsena manerantany, anisan'izany i Asia, Russia ary ny Middle Atsinanana, raha mitantana ny biraon'ny varotra any Paris, Sina, Hong Kong, Singapore, Taiwan ary Russia. Amin'ity fotoana ity dia fantatra ihany koa i Christophe sy ny ekipany noho izy nahatratra ny RevPAR avo indrindra tany Maldives.
Noho ny habetsaky ny asany niasa tany amin'ny nosy Seychelles sy Maldives izay mahavariana tokoa, tsy mahagaga raha hahita an'i Christophe ianao - izay mpanam-pahaizana antsitrika ihany koa ary marathoner mafana fo- manakalo ny akanjo amam-bolony ho any amin'ny solaitrabe na tanky scuba amin'ny fikatsahany tsy misy farany hijerena ireo zava-mahatalanjona an'ity niavaka mampiavaka an'i Langkawi ity amin'ny fotoanany.